Pyridoxal5| Mega Planet Co., Ltd
Vitamin B6 (pyridoxine HCl), found in conventional supplements, playsacrucial role in numerous life processes. Pyridoxal 5’-phosphate is the metabolically active form of vitamin B6 that has been shown to protect living lipids and proteins against glycation reactions. Aging results in the formation of advanced glycation end products (AGEs) throughout the body.1-5
Sugar (glucose) in the blood can react with proteins and lipids in the body, particularly when blood levels are high. This unwanted reaction causes the formation of AGEs, which accumulate with time and contribute to some of the signs of aging.6,7By inhibiting AGE formation and working asacoenzyme in chemical reactions, pyridoxal 5’-phosphate can support healthy nerve, eye, cardiovascular and kidney function.
Phosphate Caps – 100 mg
60 vegetarian capsules – အမျိုးအစားအမှတ်စဉ် - 01217
သာမန်အာဟာရဖြည့်စွက်စာများအတွင်းတွေ့ရှိရသည့် Vitamin B6 (pyridoxine HCl) သည် သက်ရှိဘဝပေါင်းများစွာအတွက် အရေးပါသည့် ခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်လျက်ရှိသည်။ Pyridoxal5–phosphate သည် သက်ရှိ ဓာတ်ပေါင်းများနှင့် ပရိုတိန်းများကို glycation တုန့်ပြန်မှုများမှနေ၍ အကာအ ကွယ်ပေးကြောင်းပြသပြီးဖြစ်သည့် vitamin B6 ၏ တက်ကြွသည့်ဇီဝကမ္မပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အဆင့်မြင့် glycation ပါဝင်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများ (AGEs) ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်း အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သွေးထဲရှိ (glucose) သကြားသည် ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ ပရိုတိန်းနှင့် ဓာတ်ပေါင်းများနှင့် ဓာတ်ပြုနိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် သွေးပေါင်ချိန်မြင့်တက်နေချိန်များ တွင်တွေ့ရသည်။ ဤမလိုအပ်သည့် ဓာတ်ပြုမှုမှတဆင့် အချိန်နှင့်အမျှ အသက်အရွယ်အိုမင်းမှုလက္ခဏာများဖြစ်သည့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုပုံစံများဖြစ်ပေါ် စေသည်။ အိုမင်းရင့်ရော်မှုပုံစံကို ကန့်သတ်ခြင်းနှင့် ဓာတ်ပြုမှုများအတွင်း coenzyme တစ်ခုအနေနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် pyridoxal 5- phosphate သည် ကျန်းမာသည့် အာရုံကြောများ၊ မျက်လုံး၊ နှလုံးသွေးကြောနှင့် ကျောက်ကပ်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်မည်။
ဤကုန်ပစ္စည်း၏ နောက်ဆက်တွဲအနေနှင့် အသက်အရွယ်သက်တမ်းတိုးမှုမှ pyridoxal 5- phosphate အား ဦးဆုံးဖော်မြူလာ(၂)ရပ်ဖြစ်သည့် Life Extensoin Mix နှင့် Mitochondrial Energy Optimizer with Bio PQQ ကို ရရှိစေနိုင်သည်။
ပါဝင် အရွယ်အစား - 1 Vegetarian Capsule
ဆေးတစ်တောင့်ချင်း ပါဝင် ပမာဏ
အခြားပါဝင်မှုများ : microcrystalline cellulose, vegetable cellulose (capsule), silica, vegetable stearate.
နေ့စဉ် (၁)တောင့် ကို အစာနှင့် (သို့) ဆရာဝန်မှညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းသုံးစွဲရန်